Amanani abhaliweyo: zintoni kwaye zingaphi ezikhoyo kwaye zeziphi eziqhelekileyo | Uncwadi lwangoku
Wakhe weva ngeentetho? Ziqhelekile kwimibongo kwaye enyanisweni zihlala zisetyenziswa ngaphandle kokuyiqonda, zinika izicatshulwa ubuhle obahlukileyo, ngaphaya komfanekiso okanye ukuziva ubonelela. Ngapha koko, ayisosixhobo nje sombongo, sinokusetyenziswa nakwezinye iintlobo zoncwadi.
Kodwa, Ziintoni izafobe? Kwaye zingaphi? Konke oku, kunye neminye imizekelo yokwenza ukuba icace kuwe, yile nto siza kuyixoxa nawe namhlanje ukuze ungathandabuzi malunga nengcinga yabo okanye indlela yokuzifumana kwizicatshulwa ezahlukeneyo zoncwadi.
1 Ziintoni izafobe
2 Iindidi zamanani entetho (kunye nemizekelo yazo)
2.2 Isifaniso okanye uthelekiso
2.3 Amanani eRhetorical: Ubuntu
2.4 Amanani okubhala: IHyperbaton
2.5 Amanani eRhetorical: Onomatopoeia
2.7 Amanani abonisa: Ihyperbole
2.8 Amanani abhaliweyo: Anaphora
2.10 Amanani abonisa: I-Oxymoron
Imifanekiso yentetho, ekwabizwa ngokuba ngamanani oncwadi, ayisiyiyo enye into ngaphandle izixhobo okanye iindlela zokusebenzisa amagama. Babizwa ngolo hlobo kuba into eyenziwa ngala manani kukuba amagama afumana ubuhle, ukucacisa, ubomi… ngamanye amagama, bafuna ukuba amagama achukumise, othuse, othuse… umfundi okanye umphulaphuli owavayo.
Ngokwesiqhelo, kuthatha ngaphezulu kwelizwi elinye ukufezekisa oku, kuba kukwenziwa kwamabinzana, okanye ukudityaniswa kwamagama okufezekisa oku.
Ukongeza, into engaziwa baninzi kukuba, nangona Amanani entetho ethandabuzekayo asondele kakhulu kwisihobe, inyani yona yahlukile. Ezi zinokubakho nakwezinye iintlobo, ezifana nomdlalo weqonga, isincoko okanye ukubalisa. Ngapha koko, nkqu ngolwimi oluqhelekileyo unokufumana ukubonakaliswa kwamanani oncwadi, ngamazwi okanye ngokujika.
Kodwa ngawaphi la manani? Sithetha ngazo apha ngezantsi.
Iindidi zamanani entetho (kunye nemizekelo yazo)
Okwangoku, zikhona ngaphezulu kwama-250 eentetho ezahlukeneyo, uninzi lwazo namhlanje phantse alwaziwa kwabo bangengabo "abafundi" boncwadi. Ke ngoko, ukuthetha nawe ngazo zonke kunzima kakhulu, kuba singathanda ukukukruqula. Kodwa singakwazi ukubeka izimvo kwamanye amanani asetyenzisiweyo kunye aqhelekileyo kuncwadi, nokuba sisihobe okanye ibali. Kwaye zezi:
Isikweko sinokuqondwa njenge Ukufana okwenziwa phakathi kwemifanekiso emibini, iikhonsepthi, izimvo, njl.
"Amehlo akhe abubumnyama." Kule meko, ibonisa ukuba umbala wamehlo umnyama, kodwa akalisebenzisanga elo gama kodwa elinye elibonisa ukuba (okanye ngonyana) ngokufanayo kodwa wongeza ubuhle kwisicatshulwa.
Isifaniso okanye uthelekiso
Iyafana neyangaphambili, kodwa yahlukile. Ibhekisa ekwenzeni i ubudlelwane bezinto ezimbini kunye nokuthetha kwinto abanokuthelekiswa ngayo.
"Kuyabanda ngathi ngumkhenkce."
"Yawa phezu kwakhe okokhozi kwixhoba lalo."
Kuzo zombini iimeko, okwenziweyo kukuthelekisa isenzo, okanye indlela yobukho, kunye nenye into esinika ngokucacileyo umzekelo wento eyenzekayo. Lo mzekeliso uvumela umntu ukuba avelise olo thelekiso aze ke ngaloo ndlela afumane ezo "mvakalelo" ngokunika umzekelo wendlela abafanele ukuziva ngayo.
Amanani eRhetorical: Ubuntu
Ubuntu yenye yezona ntetho zisetyenziswayo. Kwaye yenziwe kuba Ubuntu bunikwa kumxholo okanye injongo. Umzekelo:
Ngokwenyani akukho nto kule nto siyithethileyo enokuyenza loo nto, kodwa kuqhelekile ukuyibona kwiitekisi, ngakumbi kwingxelo (kwifantasy, umzekelo, okanye kwifiction).
Amanani okubhala: IHyperbaton
Ihyperbaton inyani ngu isafobe esiguquguqula ngokulandelelana kwamagama. Oku kuqhelekile kwimibongo, kuba ngaloo ndlela kulula ukwakha isingqisho okanye imitha. Kodwa akufuneki siye kule nto ukuseta umzekelo. Ngapha koko, kukho umlinganiswa othile ovela kwi-Star Wars, u-Yoda, notshintsha indlela yamagama, kwaye ngubani, ngaphandle kokuyiqonda, usibonisa ukuba yintoni i-hyperbaton.
Imizekelo yeli nani imi ngolu hlobo lulandelayo:
Msgstr "Ukuba ndikhumbula ngokuchanekileyo…". Endaweni yokuba "ukuba ndikhumbula ngokuchanekileyo ...".
"Ndiyoyika ukuba uza kubuya." Endaweni yokuba "Ndiyoyika ukuba uyabuya."
Amanani eRhetorical: Onomatopoeia
I-Onomatopoeia kumanani entetho abhekisa kwi Isandi esibhaliweyo. Umzekelo, xa inja ikhonkotha, ithi "Wow", okanye xa iqhosha "licofiwe". Ziindlela zokwenza ukuba umntu aqonde kwaye namava afanayo kwisandi sabo, kwaye sisisixhobo esisetyenziswa ngokubanzi, ngakumbi xa kubaliswa.
Isigqebelo yinto esinayo engqondweni, hayi kwizicatshulwa zoncwadi kuphela, kodwa nakubomi bethu bemihla ngemihla, ngeencoko zethu. La mabinzana afuna ukuveza omnye umntu, kodwa ngaphandle kokuwathuka, kodwa usebenzisa amagama aqhelekileyo, isigqubuthelo somsindo siyaphoswa kubo.
"Bendonwabile emva kwemini ngoku bendilinde ukuba unditsalele umnxeba." Kule meko, ifuna ukugxila kwimva kwemini echithwe kulindwe umnxeba ongazange ufike kwaye, ngokungangqalanga, uyenze yakruqula.
Amanani abonisa: Ihyperbole
Eli nani libhekisa ku ubaxo okanye unciphiso olugqithisileyo lwento. Umzekelo:
"Ndicelile uxolo lwakho izihlandlo eziliwaka." Xa enyanisweni isenokungabi lelona nani lichanekileyo.
"Ukuya kokungenasiphelo nangaphaya." Libinzana elihlala lisetyenziswa kwezothando (nangona ireferensi yokuqala inokuthi ivele kumdlalo bhanyabhanya "Ibali lokudlala") kodwa ukudlula ngokungapheliyo akunakwenzeka.
Amanani abhaliweyo: Anaphora
U-Anaphora uphinda-phindo lwamagama athile ukunika ugxininiso olukhulu kwisivakalisi okanye kumhlathi ekubhalwe kuwo.
Wazi yonke into. Wenza yonke into ngokufanelekileyo. Yena, uhlala yena.
Ibhekisa kuphindaphindo, hayi lwamagama, njengakwimeko yangaphambili, kodwa ka isandi esinye okanye ezininzi ezifanayo. Kule meko, ngokungathi usebenzisa amagama aphethe amalungu afanayo. Umzekelo:
"Ihlokondiba elidumileyo leentaka zasebusuku". Njengoko ubona, nantsi i-tur iyaphindwa, kwihlokondiba nasebusuku, kwaye xa ifundwa, isicatshulwa sinikwe ubuhle kunye nokucacisa.
Amanani abonisa: I-Oxymoron
Eli nani, alaziwa kangako kodwa lisetyenziswa ngokubanzi, liyindlela yokudala ukuphikisana okanye ukungangqinelani kwisivakalisi.
Okokugqibela, sikushiya uluhlu kuwo onke amanani athethwayo akhoyo kulwimi lwaseSpain.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Amanani okubhala
IBaltasar Magro. Udliwanondlebe nombhali kaMaría Blanchard
Iincwadi ezi-8 ezilungileyo zengqondo onokuziphosa